I-2020 entsha yeSitayile seVerman Blinds Fabric 3m Ububanzi beOfisi
Indwangu eyimfama yaseVerman yimveliso ephuculweyo yelitye elingaboniyo laseShangri-La. Ayigcini kuphela kwisiphumo esibi sekhuselo le-Shangri-La yengubo eyimfama, kodwa ikwanendlela elula yefashoni ye-venetian blinds. Uyilo oluvulekileyo lwe-webbing yelaphu le-verman eliyimfama lilungele ukususwa kothuli mihla le, ukwehla kunye neminye imisebenzi yokucoca. Ilaphu leqela elinguVerman eliyimfama lolona khetho lufanelekileyo kwiprojekthi yakho yokumfamekisa ekhaya. Ilaphu lisebenzisa imisonto ekhethekileyo kwaye lifumana unyango lobushushu obuphezulu, olomeleleyo kwaye alususi.
Ukugcinwa kunye nokucocwa kweQela leQwarhashe elingaboniyo lilaphu linje ngezantsi:
1. Ukutsala inkunkuma kunye nokususa uthuli.
2. Sebenzisa ilaphu elithambileyo okanye isiponji esimanziswe ngamanzi ashushu ukusula amakhethini ngexesha lokususa uthuli / inzalo. Ukuba kukho imfuneko, kunokufakwa iisepha ezinobulali. Sula ngobunono ukuthintela ukushwabana okanye ukonakalisa ilaphu. Ukusula kungenza ikhethini icoceke.
3. Sebenzisa isinyithi somphunga ukutshiza kwindawo emalunga ne-10 cm kude kwikhethini yelaphu, enokuba nefuthe lokususa / ukuvala inzala.
I-China Factory yokuNikezela ngeSilhouette Blinds Fabric 100% yePolyester
Ilaphu eliyimfama elinguSilhouette yimveliso ephuculweyo yelaphu eliyimfama laseShangri-La, lukhetho lokugcina imfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Ikhaba linqunyanyisiwe phakathi kwamacandelo amabini ezikrini. Xa kuvulwa imfama, indawo enomtsalane inokubonwa kwizikrini, kwaye ukukhanya okungena egumbini kucociwe ukuze kuthambe; xa imfama ivaliwe, ungaqinisekisa ukuba ngasese ngelixa ubalaselisa ubume obutofotofo beShangri-La eyimfama.
Ngamafutshane, i-silhouette yethu eyimfama ilaphu lolona khetho lufanelekileyo kumfama weefektri okanye iivenkile ezinkulu. Sinokubonelela ngeesampulu zasimahla zelinen eyimfama eyimfama kubathengi bethu. Kwaye umqulu ngamnye wobumnyama obuyimfama kwilaphu kufuneka uphumelele uvavanyo lomgangatho ngaphambi kokuhambisa.
Itape yeLad ehlala ixesha elide ye-Shangri-La Blinds yeLaphu eyi-100% emnyama
Ilaphu le-shangri-la eliyimfama eliyimfama yimveliso ephuculweyo yelaphu le-Shangri-La eliyimfama. Ayigcini kuphela kwisiphumo esibi sekhuselo le-Shangri-La yengubo eyimfama, kodwa ikwanendlela elula yefashoni ye-venetian blinds. Iteyiphu yeqela le-shangri-la eyimfama eyimfama inokukuzisa ukuziva usondele kakhulu kwindalo, ukhululekile kwaye wonwabile, ikwanokukuzisela imvakalelo yokuthula kwaye useparadesi. Yahlulahlulwe yangaphakathi ileyiphu emnyama ileyiphu shangri-la ilaphu eyimfama kunye iladi blackout ileyibheli shangri-la eyimfama.
Isixhobo se-ladder tape shangri-la ilaphu eliyimfama yi-100% ipholiyesta. Sinikezela ngeesampuli zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo. Ngaphezu, amalaphu zethu zizityebi ngombala kwaye silandele intsingiselo fashion ngamazwe.
Uyilo lwale mihla iVerman Blinds Fabric 100% yePolyester
Ilaphu eliyimfama iVerman luyilo olutsha kraca oludibanisa isisitheliso selaphu, iwindow screen kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza kunye nokuhonjiswa kwekhethini. Kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiiofisi, emakhaya, kwiihotele, kwimizi-mveliso nakwezinye izihlandlo. Ilaphu eliyimfama likaGroupeve Verman linokukuzisela imvakalelo yokusondela kwindalo, ukhululekile kwaye wonwabile, ikwanokukuzisela imvakalelo yokuthula kunye nokuba kwiparadesi. Inokwahlulwa ibe yimitha engacimekiyo yombala omnyama oyimfama kunye nomnyama omnyama ovale ilaphu.
Isixhobo se-verman blinds fabric 100% ipholiyesta. Sinikezela ngeesampuli zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo. Ngaphezu, amalaphu zethu zizityebi ngombala kwaye silandele intsingiselo fashion ngamazwe.
Uyilo olutsha Elegant Silhouette Blinds Ilaphu 100% kucinyiwe
Ilaphu eliyimfama elinguSilhouette luyilo olutsha kraca oludibanisa isisitheliso selinen, iwindow screen kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza kunye nokuhonjiswa kwekhethini.
Ukugcinwa kunye nokucocwa kweempahla zeqela leQwarhashe ezimfamekileyo kungezantsi:
1. Ukucoca i-Ultrasonic kwenza ilaphu likhanye njengokutsha.
2. Ukutsala inkunkuma kunye nokususa uthuli.
3. Sula ukucoca kukufezekisa ukucoca okunzulu, nceda usebenzise isicoci sokucoca unentloko yebrashi ukucoca ngobunono. Unokusebenzisa isomisi seenwele (esingasetwanga ukufudumeza) ukuvuthela uthuli kumhombiso wefestile.
Ilaphu lethu lesilhou blinds lelona khetho lilungileyo lokugcina iimfama okanye iivenkile ezinkulu. Sinokubonelela ngeesampulu zasimahla zelinen eyimfama eyimfama kubathengi bethu. Kwaye umqulu ngamnye wobumnyama obuyimfama kwilaphu kufuneka uphumelele uvavanyo lomgangatho ngaphambi kokuhambisa.
Uyilo olutsha lweTape yeLadi yeTape ye-Shangri-La Blinds Fabric Blackout
Ilaphu le-shangri-la eliyimfama eliyimfama yimveliso ephuculweyo yelaphu eliyimfama le-Shangri-La, lukhetho lokugcina ubumfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Iteyiphu yeleli yeqela shangri-la ilaphu eliyimfama linokukuzisela imvakalelo yokusondela kwindalo, ukhululekile kwaye wonwabile, ikwanokukuzisela imvakalelo yokuthula kunye nokuba separadesi. Lukhetho olufanelekileyo kwiprojekthi yakho yeemfama zasekhaya. Ilaphu lisebenzisa imisonto ekhethekileyo kwaye lifumana unyango lobushushu obuphezulu, olomeleleyo kwaye alususi.
Ubude bokuqengqeleka obuyi-30m, kwaye ukupakisha yityhubhu yephepha eyomeleleyo kuluhlu ngalunye. Sinikezela ngeesampuli zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo. Ngaphezu, amalaphu zethu zizityebi ngombala kwaye silandele intsingiselo fashion ngamazwe.
Ixabiso leFektri IVerman Blinds Ilaphu iSemi-Blackout
IVerman eyimfama yelaphu yimveliso ephuculweyo yelitye elingaboniyo laseShangri-La, uyilo olutsha kraca oludibanisa iscreen selaphu, iwindow screen kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza kunye nokuhonjiswa kwekhethini. Kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiiofisi, emakhaya, kwiihotele, kwimizi-mveliso nakwezinye izihlandlo. Kukhetho lokugcina imfihlo kunye nokulawula ukukhanya.
Isixhobo se-verman blinds fabric 100% ipholiyesta. Ubude bokuqengqeleka obuyi-30m, kwaye ukupakisha yityhubhu yephepha eyomeleleyo kuluhlu ngalunye. Sinikezela ngeesampuli zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo. Ngaphezu, amalaphu zethu zizityebi ngombala kwaye silandele intsingiselo fashion ngamazwe.
Umgangatho ophezulu weTape yeTape ye-Shangri-La Blinds yeLaphu eyi-100%
Iteyiphu yeladi ye-shangri-la eyimfama eyilaphu luyilo olutsha kraca oludibanisa isikrini selaphu, iwindow screen kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza kunye nokuhonjiswa kwekhethini. Kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiiofisi, emakhaya, kwiihotele, kwimizi-mveliso nakwezinye izihlandlo. Kukhetho lokugcina imfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Xa kuvulwa imfama, indawo enomtsalane inokubonwa kwizikrini, xa iimfama zivaliwe, unokuqinisekisa ukuba uyimfihlo.
Ilaphu lisebenzisa imisonto ekhethekileyo kwaye lifumana unyango lobushushu obuphezulu, olomeleleyo kwaye alususi. Kwaye izinto zelayili tape shangri-la blinds ilaphu 100% ipholiyesta. Sinikezela ngeesampuli zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo. Ngaphezu, amalaphu zethu zizityebi ngombala kwaye silandele intsingiselo fashion ngamazwe.
Ilaphu eliyimfama iVerman yimveliso ephuculweyo yelaphu le-Shangri-La eliyimfama, ukudibanisa ilaphu, iwindow screen kunye ne-venetian blind. Inemisebenzi yokufiphaza kunye nokuhonjiswa kwekhethini, eyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokugcina imfihlo kunye nokulawula ukukhanya. Ilaphu eliyimfama eliyimfama leqela elinokukuzisela imvakalelo yokusondela kwindalo, ukhululekile kwaye wonwabile, ikwanokukuzisela imvakalelo yokuthula nokuba separadesi.
Ilaphu lisebenzisa imisonto ekhethekileyo kwaye lifumana unyango lobushushu obuphezulu, olomeleleyo kwaye alususi. Isixhobo se-verman blinds fabric 100% ipholiyesta. Sinikezela ngeesampuli zasimahla kubo bonke abathengi, unokujonga umgangatho kwaye ukhethe umbala ngqo ngaphambi komyalelo. Ngaphezu, amalaphu zethu zizityebi ngombala kwaye silandele intsingiselo fashion ngamazwe.
I-2020 yeNdlela eNtsha yoLuhlu lweeNdawo eziMnyama eziMnyama
Amalaphu eqela eliphindwe kathathu ahlukile ekubunjweni nasekuhle ngenkangeleko. Ukuqhagamshela amalaphu athe tyaba phakathi kwamalaphu amabini e-sheer kunokugcina igumbi lithambile. Jika ikhaba ukuze uhlengahlengise ukukhanya kokukhanya. Ilaphu elikhethekileyo lokuthungwa linokugcina umbala ungaguquguquki ixesha elide. Ukufotwa okuqinileyo. Ukucoca amalaphu e-Ultrasonic kunokusetyenziselwa ukwenza amalaphu abonakale eqaqambile njengokutsha.
Ngokweempawu zelaphu elilele kathathu, linokwahlulwa-hlulwa libe lilaphu elimnyama elimnyama eliphindwe kathathu kunye nelaphu elimnyama elingumaleko kathathu. Izinto ngelaphu umaleko maleko 100% ipholiyesta. Iqela elinamava lineminyaka engaphezulu kwe-16 yokuvelisa ilaphu elihle nelokuphakama kwelaphu.
Ifashoni eChongiweyo ye-Shangri-La Blind Fabric Semi-Blackout
I-blind ye-Shangri-La yinto entsha edibanisa amakhethini ombane, izikrini zefestile, iimfama ze-venetian kunye ne-roller blinds. I-Shangri-La eyimfama kwintengiso kufuneka ithelekise izinto ezimbini ezinobunzima: ukucaca kunye nokukhululeka. Ukucaca kubonakala ikakhulu kubungqingqwa, ubume kunye nezinto zomsonto kwinxalenye yemesh. Xa ukukhanya okuphezulu kwe-Shangri-La kuvulwa, ukukhanya okungena kwigumbi kuninzi kwaye kuthambile; xa ivaliwe, inokufihla ubumfihlo kakuhle. Iqondo lemiphetho evulekileyo libonakaliswa ikakhulu kwinqanaba lokumanyaniswa kwepolymeyitha kunye nenxalenye eqinileyo yomsonto.
Umgangatho ophezulu weqela le-shangri-La eliyimfama elinokumelana namandla amakhulu, kwaye aliyi kuvelisa i-burrs enzima ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla. Isishwankathelo, xa ukhetha ilaphu, nceda unikele ingqalelo kumgangatho, kuphela emva koko unokukhetha i-shangri-la blinds yengubo eyonelisayo, ekhululekile kwaye ethembekileyo.
Ixesha elide le-Shangri-La Blind Fabric Semi-blackout
I-blind ye-Shangri-La yinto entsha edibanisa amakhethini ombane, izikrini zefestile, iimfama ze-venetian kunye ne-roller blinds. Ubomi benkonzo ye-Shangri-La blinds yelaphu inde kakhulu, iyamelana nobushushu obuphezulu kunye nengqele ephantsi ngenxa yeempawu zayo. Ngokusisiseko, ingxaki yokuncitshiswa kobomi benkonzo ngenxa yeqondo lobushushu elisezantsi ayenzeki kwiindawo ezineeyure ezinde zokukhanya kwelanga okanye amaqondo obushushu asezantsi ebusika. Ngale ndlela, ubomi benkonzo ye-Shangri-La bandiswa kakhulu.
Ukuba indawo engaphakathi ibalasele, ukongeza ekuweni nasekucoceni isixa esincinci sothuli kwilaphu, inokufikelela kwisiphumo seminyaka engaphezulu kwe-10 yokusetyenziswa.
123456 Okulandelayo> >> Iphepha 1/20